Kedụ ka ị si erere akara ika gị na iche iche? | Martech Zone
Earth Day bụ n'izu a ma anyị hụrụ ọsọ ọsọ nke mgbasa ozi mmekọrịta ebe ụlọ ọrụ kwalitere gburugburu ebe obibi. N'ụzọ dị mwute, maka ọtụtụ ụlọ ọrụ - nke a na-eme otu ugboro n'afọ na ụbọchị ndị ọzọ ha na-alaghachi azụ ahịa dịka ọ dị na mbụ.
N’izu gara aga, emechara m ụlọ ọrụ ịzụ ahịa na nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụike. Otu ihe m kwuru n'ime ogbako ahụ bụ na ụlọ ọrụ ha chọrọ ka ahịa ahịa mmetụta nke ụlọ ọrụ ha na-eme na gburugburu ebe obibi, nkwado, nsị na iche iche.
N'afọ ndị gara aga, ụlọ ọrụ na-ebuputakarị ụfọdụ n'ime ọrụ ebere akụkụ ụfọdụ nke uru ha, tụfuo akụkọ mgbasa ozi na onyinye ha, wee kpọọ ya otu ụbọchị. Nke ahụ anaghị egbutu ya ọzọ. Ma na-eji ọkụ na ulo oru myiri na-achọ ime azụmahịa na ụlọ ọrụ ndị na-enye ngwongwo na ọrụ ha chọrọ… ma na-eme na ọha na eze mma. Ọbụghị naanị ndị ahịa na-achọ nke a, yabụ ndị anyị chọrọ ịbụ ndị ọrụ.
Ọ bụ ezie na ha bụ ndị ahịa, enwere m mmasị na otu Dell Technologies emeela ka iwulite mmetụta ha na mmekọrịta ha n'ime usoro ntinye ha na omenala ụlọ ọrụ. Ha bu ezigbo ihe nlere. Ọzọkwa, ha anọgidewo na-eme ka ihe ọhụrụ, dị ka asọmpi dị ka ọ dị na mbụ, na anaghị achụrụ uru iji mee nke ahụ. Ha ghotara na obughi soso ihe ziri ezi ime, ọ bụkwa nnukwu atụmatụ azụmahịa.
Gburugburu na Nkwado
Nke a bụ otu ihe atụ dị ịtụnanya… Dell na-emegharị plastik ndị dị n'oké osimiri n'ime ngwugwu ha. Nkwado ha na ọrụ gburugburu ebe obibi akwụsịghị ebe ahụ. E wezụga imegharị ihe, ha na-arụ ọrụ na ntinye aha gburugburu ebe obibi, mbelata ike, na ịbelata akara ụkwụ carbon. Ha etinyewo nkwado na njikọ ọ bụla na ngwongwo ha.
Di iche iche na ndi mmadu
Dell na-emeghe ma na-akwụwa aka ọtọ banyere enweghị ọdịiche dị iche na nsonye na ụlọ ọrụ teknụzụ. Nke a emeela ka ndị pere mpe na ụmụ nwanyị enweghị ohere ndị ọzọ nwere n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Dell etinyela ego, na-etinye ego na mmemme agụmakwụkwọ ụmụaka n'oge ụwa niile, ka ọ bụrụ ihe doro anya na akụkọ nke ha. Ha etinyela ya n’ihu na etiti na mbanye ha:
Ihe ngosi na akuko
Nghọta abụwokwa isi ihe. Dell nwere na-enye akụkọ mgbe niile na ọganihu ya, na-etinye ọrụ ha n'ihu na etiti ka ndị ahịa, ndị ọchụnta ego, na ndị na-achụ ego mara maka ọganihu ha. Ha anaghị ekwu na ha nwere ofu nsogbu ndị a, mana ha na-aga n'ihu n'ihu na-akọ ma na-egosi ọganihu ha. Nke a bụ nnukwu ahịa.
Aga m agba gi ume ka idenye aha ma gee nti Dell Luminaries pọdkastị na m na-akwado ya Akara Schaefer. Anyị nwere oche mbụ, na-agba ndị isi, ndị mmekọ, na ndị ahịa nke Dell ajụjụ ọnụ na-eme ndịiche a.
Pọdkastị Dell Luminaries
Yabụ, kedu atụmatụ ụlọ ọrụ gị yana kedu ka esi ele akara gị anya site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya? Enwere ihe ndị ị nwere ike ime iji gbanwee usoro gị iji meziwanye nkwado na nsonye? Na, nke kachasị, kedu ka ị ga - esi kwue mbọ ndị ahụ rụọ ọrụ nke ọma na atụmanya gị na ndị ahịa gị?
Ma echefula… inye ego ego ezughị. Ndị ahịa na azụmaahịa na-atụ anya ịhụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya agbakwunyere n'ime ọdịbendị gị na usoro ọ bụla. Onye ahịa gị ọzọ ma ọ bụ onye ọrụ gị chọrọ ịma na ị raara onwe gị nye ime ka ụwa bụrụ ebe ka mma, ọ bụghị naanị ịhapụ ya ka onye ọzọ mee.
Tags: di iche ichegburugburu ebe obibiplastic plasticmbanyenkwado